Amathuba asetyenziselwa ukubulala abantu-iziganeko ezidumileyo zobuthi
7 Iipolisi eziye zazisetyenziselwa ukubulala abantu
Ngokomntu odumile we-toxicologist Paracelsus, "i dose yenza ubuthi." Ngamanye amagama, zonke iikhemikhali zingathathwa njengetyhefu ukuba uthatha ngokwaneleyo. Ezinye iikhemikhali, njengamanzi nesinyithi, ziyimfuneko ebomini kodwa inetyhefu kwixabiso elifanelekileyo. Ezinye iikhemikhali ziyingozi kangangokuthi ziqwalaselwa nje ngeentlanzi. Uninzi olunobuthi lube nolusetyenziso lwezonyango, kodwa ke abambalwa baye bafumana indawo efanelekileyo yokubulala nokuzibulala. Nazi ezinye izibonelo eziphawulekayo.
Belladonna okanye i-Deadly Nightshade
I-Black nightshade, i-Solanum nigrum, yenye yeyona ndlela "ye-nightshade ebulalayo". Westend61 / Getty Izithombe
U-Belladonna ( Atropa belladona ) ufumana igama lakhe kwigama lesiTaliyane bella linike "intombazana enhle" kuba isityalo sasiyinto ekhethiweyo kwi-Middle Ages. Ijusi yamajikijolo ingasetyenziselwa njengento ephazamisayo (mhlawumbi ayikho into efanelekileyo yokukhetha umlomo we-lip stain). Izidakamizwa ezilahlayo ezivela kwisityalo emanzini zenza iliso lisihla ukuze linciphise abafundi, okwenza ukuba intombazana ibonakale ithandwa ngumntu osithandayo (umphumo owenzeka ngokwemvelo xa umntu ethanda).
Elinye igama lesi sityalo libulale nightshade , elinesizathu esihle. Isityalo siphezulu kwiikhemikhali eziyingozi i-solanine, i-hyoscine (scopalamine), kunye ne-atropine. Ijusi esivela kwisityalo okanye amajikijolo ayo asetyenziselwa ukucwangcisa iicololo ngetyhefu. Ukutya iqabunga elinye okanye ukutya ama-berries kungabangela ukufa, nangona kukho ingxelo yomntu omnye owayidla malunga nama-berries ama-25 kwaye ehlala echazela iindaba.
Ingqungquthela inayo, iMacbeth wasebenzisa i-nightshade ebulalayo ukuba ibe nobuthi obuza kuvela eScotland ngo-1040. Kukho ubungqina bokuthi umbulali we-serial u-Locusta usenokusebenzisa indawo yokubulala umlawuli waseRoma ongumKlawudiyo, phantsi kwesivumelwano kunye no-Agrippina Omncinci. Kukho ambalwa amacala aqinisekisiweyo okufa ngengozi kwi-nightshade ebulalayo, kodwa kukho izityalo eziqhelekileyo ezinxulumene ne-Belladona ezingenza ugula. Ngokomzekelo, kunokwenzeka ukuba ufumane i- solanine yetyhefu evela kumazambane .
Iinkcukacha ezivela ekufeni kweCleopatra, ngo-1675, nguFrancesco Cozza (1605-1682). De Agostini / A. Dagli Orti / Getty Izithombe
Inyoka yomlilo iyingozi yobunzima bokuzibulala kunye nesixhobo sokubulala esichengeni ngenxa yokuba kufuneka ukuyisebenzise, ​​kuyimfuneko ukukhipha inetyhefu evela kwinyoka enobuhlungu. Mhlawumbi ininzi edumileyo yokusetyenziswa kwentsholongwane yenyoka yicala likaCleopatra. Iimbali-mlando zanamhlanje aziqinisekanga ukuba uCleopatra wazibulala okanye wabulawa, kunye nokubakho ubungqina bokuthi isalathisi esetyhefu ingabangela ukuba afe kunokuba inyoka.
Ukuba iCleopatra yayibanjwe yi-asp, bekungeyikufa ngokukhawuleza nangentlungu. I-asp iyona elinye igama le-cobra yaseYiputa, inyoka eyayiyokwazi ngayo uCleopatra. Wayeza kuba wazi ukuba inyoka iyabuhlungu kakhulu, kodwa ayisoloko ibulala. I-Cobra isifo sinama-neurotoxins kunye ne-cytotoxins. Indawo yokuluma iyaba buhlungu, ixutywe, kwaye iyathukuthela, ngelixa i-venom ibangela ukukhubazeka, intloko, isisonguluko kunye nokuxubha. Ukufa, ukuba kwenzeka, kuvela ekuphelelweni kokuphefumula ... kodwa oko kuphela kwizigaba zayo zangaphambili, xa sele kunethuba lokusebenza kwimiphunga nentliziyo. Nangona kunjalo isiganeko sangempela sehla, akunakwenzeka ukuba uShakespeare ulungile.
I-Hemlock yobuthi. Umfanekiso nguCatherine MacBride / Getty Izithombe
I-hemlock ye-poison (i- Conium maculatum ) isityalo esinezimbali ezide kunye neengcambu ezifana neekroti. Zonke iinxalenye zesityalo zizityebi kwi-alkaloids enetyhefu, ezinokubangela ukukhubazeka nokufa ekuphefumuleni okuphefumulayo. Ekufuphi ekupheleni, ixhoba lokutyhefuza i-hemlock ayikwazi ukuhamba, kodwa liyaqhubeka iyazi malunga neendawo ezikuyo.
Icandelo elidumileyo le-hemlock poisoning kukufa kwefilosofi yamaGrike uSocrates. Wafunyanwa enetyala lobuqhetseba waza wagwetywa ukusela i-hemlock, ngesandla sakhe. Ngokutsho kwePlato "uPaedo," uSocrates wayelisela ubuthi, wahamba kancane, waqaphela ukuba imilenze yayiva nzima. Walala emhlane wakhe, ebika ukungabi nantoni kunye nokunyuka ukunyuka ukusuka ezinyaweni zakhe. Ekugqibeleni, utyhefu lwafika entliziyweni yakhe waza wafa.
I-Nux Vomica iyaziwa nangokuthi iStrychnine Tree. Imbewu yayo iyona mthombo omkhulu we-alkaloids esinefuthe kakhulu e-strychnine kunye ne-brucine. Imifanekiso yeMedical / Getty Izithombe
I- strychnine yetyhefu ivela kwimbewu yesityalo iStrychnos nux vomica . Iikhemistri ezaqala ukukhupha i-toxin zafumana i-quinine ukusuka kumthombo ofanayo, owawusetyenziselwa unyango lwe-malaria. Njengama-alkaloids e-hemlock ne-belladonna, i-strychnine ibangela ukukhubazeka okubulala ngokungafezeki kokuphefumula. Ayikho i-antidote yobutyhefu.
Ingxelo eyaziwayo yembali ye-strychnine yetyhefu yimeko kaDkt. Thomas Neil Cream. Ukususela ngo-1878, iCream yabulala ubuncinane abafazi abasixhenxe kunye nomntu oyedwa-izigulana zakhe. Emva kokukhonza iminyaka elishumi kwintolongo yaseMerika, iCream yabuyela eLondon, apho yabetha abantu abaninzi. Ekugqibeleni wabulawa ngenxa yokubulala ngo-1892.
I-Strychnine ibe isithako esisebenzayo esichengeni sobutyhefu, kodwa ngenxa yokuba akukho-antidote, sele ithathe indawo yetsholongwane ephephile. Oku kube yinxalenye yomzamo oqhubekayo wokukhusela abantwana kunye nezilwanyana ezivela kwingozi yobungozi. Amanani aphantsi e-strychnine angatholakala kwiidakamizwa zesitrato, apho i-compound isebenza njenge-hallucinogen elula. Ifomu ehlanjululwe kakhulu yelinye iqela lisebenza njengentuthuko yokusebenza yabadlali.
I-Arsenic kunye namaqumrhu ayo ayingozi. I-Arsenic yinto eyenzekayo kokubili mahhala nakwiiminerali. Scientifica / Getty Izithombe
I-arsenic yinto e-metalloid ebulala ngokukhusela i-enzyme production. Itholakala ngokwemvelo kwimeko yonke, kuquka ukutya. Isetyenziswe kwakhona kwiimveliso ezithile eziqhelekileyo, kuquka iipilitiki kunye neenkuni eziphathekayo. I-Arsenic kunye namaqumrhu ayo yayinobuthakathaka obudumileyo kuma-Middle Ages kuba kwakulula ukufumana kwaye iimpawu ze-arsenic zetyhefu (isifo sohudo, ukudideka, ukuhlanza) kufana nekholera. Oku kwenza ukuba kube lula ukubulala, kodwa kunzima ukubonisa.
Intsapho yaseBorgia yaziwa ukuba isebenzise i-arsenic ukubulala abachasene neentshaba. U-Lucrezia Borgia , ngokukhethekileyo, wayekholelwa ukuba ungumtyholi onobuchule. Nangona ngokuqinisekileyo intsapho isebenzisa ubuthi, amaninzi amangalelwa kuLucrezia kubonakala ngathi ayinyani. Abantu abadumileyo abafa kwi-arsenic yetyhefu kuquka uNapoleon Bonaparte, uGeorge III waseNgilani, noSimon Bolivar.
I-arsenic ayiyona into efanelekileyo yokubulala iinqwelo kwilizwe lanamhlanje kuba kulula ukuyifumana ngoku.
I-Polonium iyinombolo yombolo 84 kwitheyibhile lexesha. ISayensi yeZithombe Co / i-Getty Izithombe
I-Polonium , njenge-arsenic, iyinxalenye yamachiza. Ngokungafani ne-arsenic, i- radioactive kakhulu . Ukuba ifakwe okanye ifakiwe, ingabulala kumanani aphantsi kakhulu. Kuqikelelwa ukuba igramu enye yepolonium ephefumlelweyo ingabulala abantu abangaphezu kwezigidi. Ubuthi obunokubulala ngokukhawuleza. Kunoko, ixhoba lijongene nekhanda, isifo sohudo, ukulahleka kweenwele kunye nezinye iimpawu zetyhefu. Akukho nonyango, ngokufa kuvela kwiintsuku okanye kwiiveki.
Icandelo elidumileyo kwi-polonium yetshefu yayikusetyenziswa kwepolonium-210 ukubulala umhloli wechungechunge u-Alexander Litvinenko, owayesela imveliso yomsakazo kwikomityi yetiyi eluhlaza. Kwathatha iiveki ezintathu ukuba afe. Kukholelwa u-Irene Curie, intombi kaMarie noPerre Curie, mhlawumbi wabulawa ngumhlaza owaphuhliswa emva kokuba i-polonium yaqhekeka kwilebhu yakhe.
Ukuguqula iiFrentshi ukuya kwi-Wavelength Example Work Work Problem
Indlela yokufumana ukulingana rhoqo
Imibuzo yokuVavanywa kweeMolcular Formula Practice Testing
Izithako kwi Coke
Uguqulelo lweChimistry Unit
Ukuqonda iConcept of Cryogenics
Indlela yokubala Ukunciphisa ukuLawulwa koMbane kunye nokuThengiswa koBuchule
I-Chromatography yeGesi - Yintoni na kwaye isebenza njani
Indlela yokubala ukulingana
Sebenzisa amandla eBond Ukufumana iTshintsho le-Enthalpy
Ukuguqula iiYadi kwiMitha
I-Top 15 Katy Perry Iingoma
Iingoma ezili-10 eziphezulu ze-1995
I-Anti-Markovnikov Ukongezwa Inkcazo
Iidyuli eziBomvu: Izizathu kunye neempembelelo
UJeb Bush Ubalulekile
Isikhokelo sokuGrip iTape ye-Skateboarding
Saturn in Pisces - I-Saturn Signs
Imfazwe YaseSpain Yombutho: Ukuqhubhisa iBomernica
I-Fake News: I-Kids Purportedly Ukubhema obomile, ii-Bugs Bed Crushed ukuba ziphakame
Yintoni Uhlalutyo lweSimantic Field?
Izinketho zovavanyo lweNgesi kubafundi be-ESL
Ukukhwela kweKick in Pool
Iinkcukacha Ezifutshane Nge-Italy
Ingaba isidlo sesidlo sasisasazwa ngoLwesihlanu olungileyo?
Ukubhala iziCwangciso zeSifundo kwiKlasi eZizimeleyo
I-American Cobblestone House
Inkcazo yegama I-Veto Inkcazo
Ziziphi Iingoma ezibonakalayo kwi-Elektra 'Movie Soundtrack?
Ii-Achey Breakey Parts: I-TPMS kunye neCorsion
AmaRekhodi e-World Meter angu-800
Ingcaciso yamandla enokwenzeka (U)